Logitech Craft, yakanyanya kupfuura keyboard | Ndinobva mac
Logitech payakazivisa yayo nyowani yeCraft keyboard yaive yakajeka kuti yaifanirwa kuyedzwa hongu kana hongu. Ndiri murudo neMx Master 2s uye iyo Mx Ergo, kwete chete yehunhu hwavo semidziyo asi ye software inoenda navo uye izvo zvinokutendera iwe kugadzirisa mashandiro ayo mabhatani uye mafambiro.
Khibhodi isina waya, yakadzoserwa kumashure, ine dhizaini yakanaka uye pamusoro payo iine software imwechete iyo yandinoda zvakanyanya ... Izvo zvaifanira kuratidzwa pasina kupokana uye mushure memavhiki akati wandei uchishandisa keyboard zuva nezuva ndinogona kukuudza yangu atova akura maonero. Uye mhedziso, nenzira yekupfupisa, ndeyekuti Ndiyo yakanakisa keyboard iyo iwe yaunogona kutenga izvozvi kune yako Mac. Iko kuongorora nemifananidzo uye vhidhiyo, pazasi.
2 Backlight uye bhatiri? Ine mutengo
Iyo isina waya keyboard yakagadzirwa nealuminium uye mapurasitiki, ine marongero emakiyi muSpanish, manhamba keypad, ndangariro inosvika kumatatu macomputer maunogona kubatanidza nekuchinja pakati pavo nekudzvanya mabhatani akazvipira ayo anosanganisira, iine backlight inozvigadzirisa uye inotendeuka otomatiki kana yaona maoko ako pane iyo keyboard, uye iyo zvakare ine kubatana kweBluetooth pamwe neayo yega 2,4GHz USB inogamuchira iyo iwe yaunogona kubatanidza inosvika kune matanhatu akasiyana madhijitari. Yayo 6mAh bhatiri inobhadhariswa ne USB kune USB-C tambo iyo inowanikwa mubhokisi.
Mifananidzo yacho inotaura pachayo, saka hapana zvakawanda zvekutaura nezve dhizaini yekhibhodi. Kunyangwe paine pachave nemafungiro ezvese zvido, zvinoita kwandiri yakanaka kwazvo, yazvino keyboard iyo inoburitsa mhando kumativi ese mana. Inorema (960g), iro risiri dambudziko nekuti haisi inotakurika keyboard, uye ini ndinoiona seyakanaka, nekuti iyo keyboard haina kufamba zvishoma kana iwe uchiishandisa.
Asi chinonyanya kushamisa pamusoro pekhibhodi, iyo inozvipa kuzivikanwa kwayo, ivhiri rinotenderera raanaro mukona yekumusoro kuruboshwe, uye neyatinokwanisa kuita Yakakwana inogadziriswa mabasa, kwete chete mukati meiyo system pachayo, asi zvakare inogadziriswa zvichienderana nesarudzo yaunoshandisa. Asi isu tichataura nezvazvo gare gare.
Backlight uye bhatiri? Ine mutengo
Izvo zvakakosha kana uchingozviedza, uye haumbofi wakashandisa keyboard pasina icho chimiro zvakare. Kudzosera kumashure ndechimwe chinhu chinofanira kuuya chakajairika pane ese emhando mamakhibhodi, asi yekutanga iyo isingasanganise iyo iApple. Logitech akatengesa pairi, uye akazviita neicho chinoshamisa sisitimu. Kuchengetedza bhatiri iyo kiyi yekuvhenekesa inogadzirisa kune iyo ambient mwenje, asi inogara ichishanda. Zvinogona kunge zvisina musoro kuti khibhodi ijekeswe masikati, asi hazvisi, zvirinani kuti ndinoifarira.
Asi pamusoro pekugadzirisa kune iyo ambient mwenje, iyo keyboard inodzima uye nekuenderera zvichienderana nekushandisa kwayo. Kungoisa maoko ako pairi, pasina kuibata, mwenje wekumashure unotendeuka, uye masekonzi mashoma mushure mekumira kuishandisa, inodzima. Haufanire kumirira kuti iwe ubaye kiyi kuti mwenje uoneke, sezvazvinoitika nemamwe makiyi, apa inoona kuti urikuiridza uye usati waita iwe wakagadzirira iyo.
Izvi zvinouya nemutengo: kuzvitonga kungave kuri nani. Kushandisa kwangu kwave kuri kwakasimba uye zvachose pa. Iyo keyboard ine bhatani rekuidzima zvachose, asi ini handishandise, handina tsika iyoyo. Nemhando iyi yekushandisa, bhatiri rinonditorera ingangoita mavhiki maviri, zviri pachena zviri nani, asi ini handina basa nazvo. Nekuti iyo keyboard inokuyambira iwe munguva yekuchaja iyo zvese nezviziviso pachiratidziri uye iine LED iyo yainayo mukona yekumusoro yekona, uye iyo inovhenekera mune tsvuku kana bhatiri iri pasi. Kana rimwe zuva rikatsvuka rakatsvuka, husiku ihwohwo ndakariisa pacharge uye ndobvisa iro mangwana acho.
Iyo keyboard ndeyekutaipa, uye iyi Logitech Craft yakasununguka kwazvo nekuda kwehukuru hwayo, makiyi ayo nerwendo rukuru kupfuura Apple's butterfly keyboards, yakanyarara uye yakanyatsogadzikana kushandisa kwemaawa akati wandei pasina matambudziko. Makiyi ane concavity diki munzvimbo yepakati, uye saizi uye kupatsanurwa kwandakachinjika nekukasira. Iyo keyboard yakagadzirira kushandiswa neWindows uye neMac, hapana kana chauchapotsa.
Asi iyo nyeredzi chimiro chekhibhodi hapana mubvunzo iro rinotenderera vhiri. Nayo tinogona kuita akasiyana mabasa, ese acho anogadzirisa kubva kuLogitech Sarudzo yekushandisa iyo iwe yaunogona kurodha pasi kubva kuLogitech webhusaiti (link). Mupumburu, famba pakati pematafura, tenderera mifananidzo, zoom, tora screenshots… Mikana yauinayo pakugadzirisa rinotenderera vhiri basa rakakura, uye kana ukasakwanisa kuwana iyo yaunoda pakati peavo vanowanikwa mukushandisa, unogona kugara uchipa mabhatani ebhodhi kuita chiratidzo, saka mikana yacho haiperi.
Asi iwe unogona zvakare kugadzirisa mashandiro evhiri kunyanya kune yega yega application, kuitira kuti kana uchitenderera muChannel unofamba kuburikidza neakavhurika matabhu uye kana uchidaro muIzwi unodhonzera wakamira kuburikidza ne peji rauri kuona. Kana iwe uine zvimwe zvigadzirwa zvakaita seMx Master kana Mx Master 2s mbeva, kana iyo Mx Ergo trackball, mikana inowanda, nekuti nekudzvanya kiyi yeLogitech Craft uye nekuita chiratidzo negonzo unenge watove nemabasa matsva. Chinangwa ndechekuti iwe uve nezvose pazvigunwe zvako pasina kuasimudza kubva kukhibhodi, uye iyi Logitech Craft inozviita.
Iwe unozowira murudo neLogitech Craft keyboard pakuona kwekutanga nekuda kwekugadzirwa kwayo, kuvaka mhando uye maficha senge backlighting. Asi. Kana iwe zvakare uchiiperekedza nemamwe maratidziro emidziyo, pamwe neLogitech Sarudzo software, mikana yekuvandudza kugadzirwa kwako kuwanda. Nemutengo unowanzo kuve wakakomberedza € 150-160 mukati Amazon, hausi kuzowana iri nani keyboard yako Mac.
Adjustable uye otomatiki backlighting
Rotating vhiri neyakajairika mabasa
Dhizaini yepamusoro uye zvigadzirwa
Yakanyatsogadzikana yakazara keyboard ine ndangariro nhatu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Logitech Craft, yakanyanya kupfuura keyboard
Iyo keyboard yakanaka kwazvo uye yakagadzirwa zvakanaka, zvinorwadza kuti iwe unofanirwa kubatanidza bluetooth nguva dzese painotenderedzwa uye nezuva rese. Iyo chaiyo yakanatswa shit. Iyo bhatiri haigare kana nekushamisika uye vhiri rinoshanda sekushongedza nekuti zvirongwa senge Photoshop hazvishande uye hapana chavanoita icho imwe keyboard isingaite. Iko kutambisa mari uye Logitech chitsotsi.
Uye ndine makore maviri nekhibhodi isina kumboshanda, vakaichinjira imwe uye zvakafanana. Ndakadzokera kuApple keyboard.